August 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Aung Ko Htet at 9:16:00 PM 0
လူကြိုက်များကြတဲ့ social website လေးကို android phone တွေနဲ့ iPhone တွေမှာပဲ application လေးတွေနဲ့သုံးရတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ အခုတော့ window phone တွေမှာလည်းသုံးလို့ရအောင် ထုတ်လုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ သူများတွေနဲ့မတူပဲ window phone အတွက်ကျတော့ XAP ဖိုင်နဲ့လာတာပါ။ Window Phone ပိုင်ရှင်တွေကတော့ address bar မှာ url ကို ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီ application လေးကိုအသုံးပြုပြီး အများနည်းတူလန်းနိုင်ပါပြီဗျာ။ သတိပြုစေချင်တာကတော့ window phone7user သီးသန့်ပါခင်ဗျာ။
ဗီဒီယို file တွေအကုန်လုံးကို format ပြောင်းပေးမဲ့ Any Video Converter (v 5.0.9 )
Aung Ko Htet at 8:02:00 PM 0
ဗီဒီယို file တွေကိုအကုန်လုံးကို ကြိုက်တဲ့ format ပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့် all in one video converting tool လို့တောင်ခေါ်
နေကြတာပါ။ သူပြောင်းလဲပေးမဲ့ vedio file format တွေကတော့ DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI စတာ
format တွေကို MPEG-4 အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမဲ့ အပြင် smart phone တွထဲမှာလဲ အသုံးပြုလို့ရအောင် format ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့
အတွက် ကြိုက်သလို format ပြောင်းနိုင်ပါပြီဗျာ။
PDF Softwares ဆော့ဖ်ဝဲများ
PDF ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရမယ့် novaPDF Professional Desktop 7.7 Build 393
Maung Pauk at 7:13:00 PM 0
novaPDF Professional Desktop ဗားရှင်းအမြင့် 7.7 Build 393 ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီကောင်က PDF လုပ်တာ သိပ်ကောင်းတယ်ဗျ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း မကြီးဘူး.. ပြီးတော့ လုပ်နည်းကလည်း မခက်ဘူး. ဒီကောင်ကို Install လုပ်လိုက်ရင် Printer မှာ novaPrinter တစ်ခု ရလာတယ်.. ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို Print ထုတ်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်.. Printer နေရာမှာ novaPDF ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် PDF ဖြစ်ပြီဗျ.. Office တွေမှာဆို Addin တောင် ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်.. . PDF လုပ်နည်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်ပါ..
Rooting Samsung Samsung Rooting နည်းလမ်းများ
Samsung Galaxy S Duos S7562 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများ အရင်ဆုံး computer မှာ
samsung usb driver အရင်းသွင်းထားရမှာပါ ပြီရင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
Galaxy S Duos S7562 ကို root ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန်
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ zip ဖိုင်းကို zip ဖြည့်လိုက်ပါ အထဲမှာ ဖိုင်း4ခုရှိပါတယ်
ပြီရင် Odin ဖိုင်းကိုဖွင့်ပြီ run လိုက်ပါ ပြီရင် ဖုန်း usb setting တွေကို ၀င်ပြင်ပြီ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ
ပြီရင် downloand mode ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရမှာ ဖြစ်သဖြင့် vol-down + home ကိုဖိပြီ power ကိုဖိပြီဖွင့်
ပေးလိုက်ပါ ပြီရင် downloand mode ၀င်ဖို့ အတွက် vol-up ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင် စက်ရုပ်ပုံနဲ့
downloanding စာတန်တက်လာရင် downloand mode ရောက်ပါပြီ ဒါဆို ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ စောစောက odin အကွက်မှာ အ၀ါရောင်းတန်တက်လာရင် ချိတ်ဆက်မူအောင်မြင်ပါပြီ..
ပြီရင် Odin အကွက်က PDA နေရာမှာနှိပ်ပြီ စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ root ဖိုင်းဖိုဒါထဲက
CWM recovery zip ဖိုင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ပြီရင်တော Start နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပြီ ခဏစောင့်ပါ ပြီရင် အ၀ါရောင်း အတန်ပေါ်မှာ PASS စာတန်တက်လာရင် usb ကြိုးချိတ်ဆက်ထားတာဖြုတ်လိုက်ပါ ဒါဆို cwm recovery mode
သွင်းလို့ ပြီပါပြီ root ဆက်လုပ်ဖို့ အတွက် စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ root ဖိုင်းတွေထဲက
cwm superuser zip ဖိုင်းကို SD card ထဲ copy ကူထည့်လိုက် ဖုန်းထဲ ပြန်ထည့်ပါ ပြီရင် ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ ပြီရင် vol-up + vol-down+home ကိုဖိပြီ power ကိုဖိဖွင့်ပါ ပြီရင် samsung logo တက်လာရင် vol-down ကိုလွှတ်ပြီ ကျန်တဲ့ ခလုတ်သုံးခုကို ဆက်ဖိထားပါ ဒီပုံအတိုင်း တက်လာပါမယ်..
ပြီရင် vol ခလုတ်ကို အသုံးပြုပြီ Install Zip From Sdcard ....>> Choose zip From Externel Sdcard
ကိုသွားပြီ စောစောက copy ကူထားတဲ့ cwm superuser zip ဖိုင်းကို install လုပ်ပေးပြီ system reboot ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ဖုန်းက reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
အကယ်၍ cwm recovery mode ပြန်ဖြုတ်ခြင်တယ်ဆို စောစောက cwm recovery mode သွင်းခဲ့တဲ့အတိုင် PDA နေရာမှာ Stock recovery ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပြီ start ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်
Credit : SmartGhost (ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ )
Baiduakey Root Tool (uRoot) New Version 3.3.03
Maung Pauk at 3:39:00 PM 0
28.8.2013 နေ့ရက်စွဲနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ China Root Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Baiduakey Root Tool (uRoot) Version 3.3.0 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော့် Computer ပျက်နေလို့ လိုင်းမတက်ဖြစ်တာနဲ့ နောက်ကျနေတာပါ.. သူများကွန်ပျူတာ ယူထားရတာဆိုတော့ သိပ်အရှည်ကြီးရေးမနေတော့ပါဘူး.. Root Tool တွေအားလုံးကို ဒီမှာ တင်ထားပါတယ်.. အဲဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
Android Phone Brand ပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) ကို Root နိုင်တဲ့ Perfect root official version အသစ် 1.0.3
Maung Pauk at 3:32:00 PM 0
28.8.2013 ရက်နေ့က အသစ်ထွက်လာတဲ့ Perfect root official version အသစ် 1.0.3 ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော့် Computer ပျက်နေလို့ လိုင်းမတက်ဖြစ်တာနဲ့ နောက်ကျနေတာပါ.. သူများကွန်ပျူတာ ယူထားရတာဆိုတော့ သိပ်အရှည်ကြီးရေးမနေတော့ပါဘူး.. Samsung, HTC, Sony, Google , HTC, Huawei, Sony, Lenovo တို့ရဲ့ Android Smart Phone တွေနဲ့ အခြား Brand တွေအပါအဝင် Brand ပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) ကျော်ကို error ကင်းကင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် Root နိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်. . Root Tool တွေအားလုံးကို ဒီမှာ တင်ထားပါတယ်.. အဲဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
Design စာအုပ်များ e-books
Myanmar IT Helper at 3:07:00 PM 0
Maung Pauk at 3:05:00 PM 0
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ Warren Buffet ရဲ့  ခံယူချက် အဆိုအမိန့်အချို့  က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကို ဘယ်တော့မှမရပ်တည်နဲ့ အခြား ငွေရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (second source) မှာလည်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ပါ။
ကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကို ဝယ်လိုက်မိရင် ကိုယ့်ဆီက အသုံးဝင်တဲ့ အရာပစ္စည်းတစ်ခု ရောင်းရတော့မယ်လို့ သိထားပါ။
သုံးပြီးငွေမှ ပိုတာကို မစုနဲ့။ စုပြီးငွေမှ ပိုတာကို သုံး..။
မြစ်ထဲကို ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး စိမ်ဖို့ စိတ်မကူးမိစေနဲ့…။
ခြင်းတောင်းတစ်ခုထဲမှာပဲ ကြက်ဥ အကုန်ထည့်မထားနဲ့..။
ရိုးသာမှုဟာ လောကမှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခုပဲ၊ ယင်း အရာကို ဈေးပေါပေါ လူတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မမျော်လင့်နဲ့..။
Ebook Hacking Hacking စာအုပ်
Modem တည်းတွင် SIM Card မရှိဘဲ အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း (Ebook)
Pyae Phyo at 2:06:00 PM 0
ကိုမင်းစိုးရာဇာဆီကနေ ရှာဖွေခဲ့တာပါ။ အဲ့နည်းက Free သုံးဖို့ Hack ရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသိသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် ပြန်လည်ပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း Download ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ ဖျက်လိုက်ရင်တော့မသိဘူး။ :D
Description : ဒါလေးကတော့ Modem တည်းမှာ SIM Card မ၇ှိဘဲ အင်တာနက်သုံးနိုင်သလို ကြိုက်သလို ကလိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဖတ် ပြီးရင် နည်းနည်းဦးနှောက် ထပ်သုံးကြည့်ပါ။
နောက် လုပ်လို့ ရတဲ့နည်းတစ်ခု နဲ့ ချိတ် ဆက်နေသေးတယ် ဗျ ဒါကတော့ နောက်မှ အေးဆေးထပ်တင်ပေးမယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်တောင် စာကျက်နေရင်း ပျင်းလို့ 
ရေး ချ ထလိုက်တာပါ။ စာအုပ်လေး က ဖတ်ရတာစာ မချောရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ ညီကိုမောင်နှမတို ..
ကဲ ဒေါင်းလော့ရယူဆိုသများ မိမိ ကြိက်နှစ်သက်ရာလင့်မှာဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါပီ။
Internet Tools Network ဆော့ဖ်ဝဲများ
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအတွက် Hotspot Shield (v 3.13 )
Aung Ko Htet at 7:04:00 PM 2
Hotspot Shield ဆိုတာကို ကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်လေး နည်းနည်းပြောပြချင်လို့ပါ။ မပြည့်စုံဘူး၊ မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း အနူးညွှတ်
တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ software လေးက ကိုယ့်ကို block လုပ်ထားတဲ့ website တွေနဲ့ content တွေကို unblock အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင်
ကူညီပေးမဲ့ software လေးပါ။ ကိုယ်က ရုံးတို့၊ ကျောင်းတို့မှာ အင်တာနက်သုံးရပြီဆိုရင် အချို့ နေရာတွေမှာ သူတို့မသုံးစေချင်တဲ့ site တွေကို
ပိတ်ထားတာကိုခံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီ software လေးကို သုံးလိုက်ရင် မသုံးစေချင်တဲ့ website တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့
IP ကိုလည်း မဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အတွက် လုံခြံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနောက်ဆုံးထွက် software လေးက online မှာရှိနေတတ်တဲ့
maleware တိုက်ခိုက်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Hackers တွေရဲ့ နည်းမျိုးစုံတိုက်ခိုက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ကိုစမ်းသုံးကြည့်နေ
တုန်းမို့လို့ မပြည့်စုံတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်ကို review ရေးပေးလိုက်ရခြင်းပါ။
ကျွန်တော်လည်း သုံးကြည့်စေချင်လို့သာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ တကယ်လို့သုံးဖူးတဲ့ လူတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ကူညီဖြည့်စွက်
တဲ့အနေနဲ့ အောက်က comment box မှာ comment ပေးခဲ့ကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
Hard disk ထဲက file တွေကို နေရာတကျပြန်စီပေးမဲ့ Defraggler (v 2.15.742 )
Aung Ko Htet at 6:52:00 PM 0
Hard disk space တွေကို ဒီအတိုင်းမထားပဲနဲ့ အစီစဉ်တကျ ပြန်စီပေးခြင်းဟာလည်း ကိုယ်သုံးမဲ့ ကွန်ပျုတာလေး ပေ့ါပါးပြီး file တွေလည်း ပွစာကျဲစရာမရှိတော့ဘူးပေ့ါဗျာ။ ကိုယ့်ကွန်ပျုတာလေးကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးချင်ရင် hard disk ကို defraggler လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းပေ့ါပါးစေပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ Hard disk ထဲက ပြန့်ကျဲနေတဲ့ file တွေနေရာတကျပြန်စီပေးပြီး ကိုယ်ကွန်ပျူတာလေးကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။
အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အသစ်ထုတ် Chrome Browser ( v 31.0.1612.1 )
Aung Ko Htet at 6:24:00 PM 0
ဒီ browser ကိုလည်းမသုံးဘူးတဲ့ သူမရှိလောက်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ Google ရဲ့ products ဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းနီးနီးတော့ သုံးဖူးမှာပါ။
Mozilla firefox ပြီးရင် ဒုတိယ လူသုံးအများဆုံး browser လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အသစ်လေးမို့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အိုင်တီသားလေး at 8:58:00 AM 0
Nokia N8 နဲ့ Belle smartphone တွေအတွက် Maze Lock Pro 1.5
Aung Ko Htet at 8:46:00 PM 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Nokia အတွက် application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Nokia အတွက် application တွေက သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ အရမ်းရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများနာမည်ကြီးတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်တည်းရပ်တည်နေတဲ့ nokia ရဲ့ သတ္တိကတော့ ချီးကြူးစရာပါ။ အခုဆိုရင် Nokia N8 နဲ့ Belle smartphone တွေကို အသုံးပြုလာကြတဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့နေရပြီဆိုတော့ application လေးတွေကို အလွယ်တကူရနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ application လေးက ကျွန်တော်တို့ android တွေလိုပဲ ကိုယ့် screen ကို lock လုပ်ပေးတဲ့ application လေးပါ။ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ သူ့ design ကိုတွေ့တာနဲ့ Nokia အသုံးပြုတဲ့ သူတွေကတော့ ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် version 1.50 အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီ application လေးကို Nokia အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ စွဲလမ်းမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်က ပုံတွေကိုကြည့်ရင် လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Aung Ko Htet at 8:21:00 PM 1
Mozilla firefox browser ကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် နောက်ဆုံး version လေးပါ။ ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ ဒီကောင်လေးနဲ့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဗျာ။ မရှိသေးတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီကောင်လေးကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူများတွေနဲ့မတူပဲ version အသစ်သုံးရပါပြီဗျာ။
Huawei Lock/Unlock NEWS Phone Application
IMEID နံပတ်နဲ့ Code တောင်းလာသူများအတွက် Unlock Code များ
Maung Pauk at 3:01:00 PM 3
27.8.2013 ရက်နေ့ ညနေ4မှ 28.82013 ရက်နေ့ နေ့လည်2နာရီ 30 မိနစ်ထိ လက်ခံရရှိထားတဲ့ Unlock Request တွေကို သက်ဆိုင်ဆရာ အီးမေးတွေဆီကို ပြန်ကြားထားပြီးပါပြီ. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အီးမေးလက်ခံမရှိခဲ့လျှင် ဖတ်လို့ရအောင် အီးမေးနဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ခု ဖေါ်ပြတာကတော့ IMEI နံပတ် ဂဏန်း (၁၅) လုံးမဟုတ်ဘဲ ဂဏန်းနဲ့အက္ခရာတွေ ပါဝင်တဲ့ IMEID နံပတ်တွေအတွက်ပါ.. C8813 တွေ တစ်ချို့မှာ IMEID နံပတ်ပဲ ပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်.. အဲဒီနံပတ်နဲ့ Code တောင်းတဲ့အခါ Code ၂ မျိုးရလာပါတယ်.. အဆင်ပြေမယ်၊ မပြေဘူးဆိုတာ မသေချာပါဘူး.. အဆင်ပြေ/မပြေ ပြန်ပြောပေးကြစေချင်ပါတယ်..
စာရင်းမှာ အီးမေးနဲ့တကွ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
1. Hut Lay <hutlay@gmail.com>
IMEID = A0000043321EA7
Unlock Code 1 = 49926154
Unlock Code2= 64160411
2. ဟစ်ဟော့ <hha123@gmail.com>
Unlock Code 1 = 42945505
Unlock Code2= 42346706
3. Naymin Naung <thureinmin.naymin@gmail.com>
MEID - A000004337744F
Unlock Code 1 = 58065601
Unlock Code2= 47950438
4.skc kosai <skc.kosai23@gmail.com>
MIED : A0000043322F7D
Unlock Code 1 = 38956656
Unlock Code2= 50499577
5. cdma unlocker <cdmaunlocker777@gmail.com>
model - C8813
Unlock Code 1 = 61913395
Unlock Code2= 52522967
Unlock Code 1 = 35319523
Unlock Code2= 48643252
6. kozayar.december@gmail.com 428373678 <kozayar.cdl@gmail.com>
Unlock Code 1 = 55449943
Unlock Code2= 40673999
7.Heinhtatzaw Heinhtatzaw. <nightlaypyal@googlemail.com>
Unlock Code 1 = 36749891
Unock Code2= 66823620
8. Rphyo Gyi <rphyogyi@gmail.com>
Model = C8813
IMEID = A000004332E53F
Unlock Code 1 = 59446044
Unlock Code2= 48684893
Myanmar IT Helper at 1:20:00 PM 1
အဆိုတော်စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ပုံတူကောက်ကြောင်း အတ္ထုပတ္တိစာအုပ်
အိုင်တီသားလေး at 10:58:00 AM 0
ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းက စွဲလမ်းနှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ပုံတူကောက်ကြောင်း စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်းတွေနားထောင်မိတိုင်း ၊ ချယ်ရီ၊ ထင်းရှုးနဲ့ ရိုးမရဲ့ မြေနီလမ်း
လေးတွေကို အိပ်မက်မက်ချိန်တိုင်း၊ ချယ်ရီပင်အောက်ကို နောက်တစ်ခေါက်တော့သွားဦးမှပဲလို့ စိတ်ကူး
ယဉ်မိကြပါတယ်။ ၁၉၇၀ မြန်မာပြည်စတူရီယို ခေတ်ဦးမှစပြီး ယခုမျက်မှောက် ခေတ်လူငယ်များစွာတို့ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်များပျော်ဝင်စီးမြောခဲ့ကြဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် စတူရီယိုတေးဂီတလောက အကြောင်းပြောရရင် ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်၊ သဘာဝရင်သွေးငယ် များဟာမပါမဖြစ်ပါ။ ကြွေလွင့်သွားတဲ့ အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့်ရဲ့ ဘ၀အကြောင်းကို နှမြောတသ၊ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook Like Page လေးကိုနှိပ်ပြီး အားပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုခင်မင်လျှက်........
မြန်မာစာပေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် မြန်မာစာမြန်မာမှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြသူများ စာအုပ်
အိုင်တီသားလေး at 9:56:00 AM 0
မြန်မာစာပေကို ချစ်မြတ်နိုးသများအတွက် မြန်မာစာမြန်မာမှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြသူများ စာအုပ်တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစာပေသမိုင်းနဲ့ အမျိုးသားစာပေခေါင်းဆောင်ကြီးများအကြောင်းဖတ်ရှုရမှာဖြစ်
ပါတယ်။ မြန်မာစာပေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။
Superhero Stickman 2.0.0 .ipa (iPhone 3Gs/iPhone/iPad game)
Pyae Phyo at 9:57:00 PM 0
ဟီးရိုး စတစ်အချောင်းတွေပေါ့။ ကလေးအတွက် ဆော့ဖို့ဆိုရင် တော်တော်လေးသင့်တော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆော့ကြည့်တာ ရှယ်ပဲ။ ဒုံကြည်တွေကိုရှောင်။ ဘာရှောင်ညာရှောင်ပေါ့။ ဟီး။ Apple Store မှာတော့ $0.99 ပေးရပြီး ဒီမှာတော့ Free ပါ။ အတိအကျသိချင်ရင် http://adf.ly/UgJw8 မှာဝင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Challenge your friends in this highscore-based Stickman game.
Features:3difficulty options
Maung Pauk at 7:30:00 PM 2
အနော်ေ၇းလိုက်တဲ့ပို့စ်ဟာ brothers တို့အတွက်အသုံးဝင်သွားတယ်ဆိုရင် အနော်ပင်ပန်းရကြိုးနပ်တာပေါ့ဗျာ...
Kingdom War Defense .ipa (iPhone/iPad/iPod game)
Pyae Phyo at 6:40:00 PM 0
အရင်တုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးရှိပါတယ်။ ပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့ ဟိုးအရင်ခေတ်တွေလိုပဲ စစ်တိုက်တဲ့ game တစ်ခုပေါ့။ ပြီးတော့ လူတွေအစား၊ goblins တို့လိုမျိုး မိစ္ဆာမျိုးစားဝင်လာပါတယ်။ Apple Store မှာတော့ $0.99 ဖြင့်ရောင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့ Free ပါ။ ပိုသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/UddyD မှာကလစ်ပြီးဖတ်ပါ။ Download links တွေက အောက်မှာရှိပါတယ်။ ယူလိုက်ပေါ့။
STORY:The Kingdom was onceabeautiful place to live, with lavish gardens and amazing fruits. It was strongly united and stood asashinning beacon for all to see far and wide. But where there is good, there is also always evil. Waiting and lurking in the shadows Dark Merlin, plotted and planned to overthrow the great King. Castingamagical spell only to be undone by one brave soul, he unleaded Pandora's box and let lose waves of goblins, dwarfs, skeletons, giants and handful of dark possessed enemies to overthrow the King and destroy the empire.
MISSION:Bringing togetheramix of new and old game styles, Kingdom War Defense isasub-genre of real-time strategy role-play games. The goal of Kingdom War Defense is to try to stop enemies from crossingamap by building traps to slow them down and towers which shoot at them as they pass.
• Medieval twist to TD strategy games. Middle-earth creatures and environments
• Place powered magical towers to defend against enemies
• FIRE TOWERS, MAGIC TOWERS, ARROWS, ARCHERS, SPIRITS AND BOMB TOWERS
• Upgrade towers to better weapons and faster attack time
• Amazing scenarios and environments with beautiful graphics
CUSTOMER GUARANTEE:We will be adding more and more features in the coming weeks with new updates. We are committed to making Kingdom War Defense (TD), role-play adventure the best available, with your help and suggestions we will improve on every update.
Microsoft Programming Softwares
Pyae Phyo at 5:30:00 PM 0
ကျွန်တော့်ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးထားပါတယ်။ သူက Free ဆော့ဝ်လ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အခြေခံဆော့ဝ်လ်နဲ့ အလွယ်ရေးလို့ရတဲ့ Microsoft ကထုတ်ထားတဲ့အထူးရှယ် ဆော့ဝ်လ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်လည်း မသုံးတတ်ပါဘူး။ Program အသေးစားလေးတွေရေးရင် သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပဲ။ ပိုသိချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။
Mirosoft Small Basic puts the "fun" back into computer programming. Withafriendly development environment that is very easy to master, it eases both kids and adults into the world of pogramming.